Brooklyn Flea waxay u imanaysaa Williamsburg Axadaha
Tan iyo Abriil 2008 aasaasiyeyaashii Brownstoner.com (blog-ka Brooklyn) ayaa maamula Brooklyn Flea, oo ah suuq weyn oo dhamaadka wiigga ah kaas oo ka muuqda in ka badan 150 iibiyeyaal "dukaanno, dhar duug ah, alaabta gacmeed, dahab, cunto, baaskiil, diiwaan, iyo in badan. " Suuqa kowaad wuxuu ka bilaabmay Fort Greene, tan iyo markii la ballaariyay si loogu daro suuq labaad oo suuqa ah, oo bannaanka la dhigo xilli-cayaareed, Williamsburg.
Ma aha oo kaliya dusha sare ee Williamsburg Axadda Brooklyn Flea waxay ka kooban tahay iibiyeyaal badan oo iibiya raashinka iyo badeecada, goobta lafteeda, oo ku taal bangiyada Bariga Bariga, waxay leedahay aragtiyo cajiib ah oo ah Manhattan skyline.
Flea waxaa lagu xannibay inta udhaxeysa Northside Pier iyo Park iyo East River Park, iyada oo dadka martida ah siinaya meelo badan oo la dhigto.
Qiyaastii 75% iibiyeyaasha Brooklyn Flea waa iibiyeyaasha beeraha - dharka, kabaha, iyo boorsooyinka, inta badan dumarka. Gacan-siinta gacanta, dharka gacanta, iyo farshaxan-gacmeedyada ayaa sidoo kale si fiican u matala. Dhanka dambe ee suuqa (ku dhow Wabiga Bariga) waxaad ka heli doontaa koox iibiya alaab iibiyaal leh waxyaabo cajiib ah oo ka soo jeeda, miisaska looxyo ilaa qolalka qiiqa iyo nalalka. Badeecadaha ugu weyn (iibinta dharka iyo kabaha) ayaa ah kuwa ugu muhiimsan suuqa, laakiin waxaa jira isbeddel dhab ah oo isbeddel ah marka iibiyeyaasha cusubi yimaadaan oo tagaan.
Badeecada intooda badani waxay aqbalaan lacag caddaan ah, waxaana jira ATM ah meel u dhow galbeedka Waqooyiga si aad ugu raaxaysato. Qaar ka mid ah, si kastaba ha ahaatee, aqbalaan kaararka deynta marka la eego shuruudaha ay tahay inay markaas kuugu soo dalacaan cashuurta. Hoos-u-dhac suuqyada dibadda ah ma jiraan wax musqulo ama qolal bedela.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dad badan oo iibiya cuntooyinka - sidaas darteed ka boodboodi oo gaajada!
Ku noqoshada iibiye
Haddii aad xiiseyneyso iibinta halkii aad ka iibsan lahayd, waxaad codsan kartaa inaad ku noqoto shirkad Brooklyn Flea, midkood Fort Greene ama goobta Williamsburg. Si fudud u booqo www.brooklynflea.com kadibna riix 'Sell' tab.
Waxaa laguugu hagaajin doonaa inaad buuxiso foom ama waxaad e-mail ugu diri kartaa su'aalo.
Haddii aad ka imanayso Manhattan, u qaado L-tareenka Bedford Avenue. Ka baxso Waqooyiga 7th Street, sii wad Koonfurta on Bedford Avenue ilaa Waqooyiga 6th Street. Qaado jidka North 6th Street. Gudubka Berry, kadibna Wythe, dabadeed Kent Avenue. Brooklyn Flea waxay ku fadhidaa bangiga Wabiga Bariga, oo gadaashiisa ka dambeysa laba cinjir oo waaweyn.
Haddii aad ka timaaddo Brooklyn ama Queens, G G Train u qaado Nassau. Baxsiga Bedford Avenue, sii wad koonfurta on Bedford (waxaad ku socon doontaa adoo sii marin doona McCarren Park) illaa Waqooyiga 6aad. Qaado jidka North 6th Street, oo sii wad Bariga dhinaca biyaha. Gudubka Berry, kadibna Wythe, dabadeed Kent Avenue. Brooklyn Flea waxay ku fadhidaa bangiga Wabiga Bariga, oo gadaashiisa ka dambeysa laba cinjir oo waaweyn.
Hagaha Diiwaangelinta iyo Diiwaangelinta ee Queens, New York
Maalinta Xusuusta ee Magaalada New York
Bandhigga Daawashada Wonder Wheel ee Waddada Weyn: Hagaha Fulinta
Hagaha Dalxiiska ee Dhismaha Safarka ee Gobolka
Sawirrada Baxashada, Queens
Matxafka Muuqaalka Muuqaalka
Waxyaabaha ugu Sarreeya ee Bologna, Talyaaniga
Maalmaha iyo Saadaasha Hindisaha Indiana State Fair
Qorsheynta Wadada Wadada ee New Zealand
Tilmaamaha Canshuurta ee DC (Waxa aad u Baahan Tahay Inaad Ogaato Canshuurta DC)
Hagaha Safarka ee Mali: Xaqiiqda Muhiimka ah iyo Macluumaadka
Diyaaradda New York City
The 9 Best St. Louis Hotels ee 2018
Bowling ee New York City
Gibbys Steakhouse - Dib u Eegista Cuntada Montreal
Sida loo Aqoonsado, Loo Daaweeyo iyo Iska ilaali Dareeraha kuleylka
Doorashada Farshaxanka Musikada ee Philadelphia
Dhulka Dibadda ee Europa-Park - Qaybta 1aad